🍒Casino FastPay - Toerana ofisialy, fisoratana anarana, Bonus 2021
FastPay Casino >FastPay Online Casino - Slots tsara indrindra ary fandoavam-bola haingana amin'ny toerana iray
FastPay Online Casino - Slots tsara indrindra ary fandoavam-bola haingana amin'ny toerana iray
Famerenana tranonkala ofisialy FastPay
Fifanakalozana ara-bola ao amin'ny casino FastPay
Masinina isan-karazany ao amin'ny FastPay
Vola sy tolotra fampiroboroboana ho an'ny mpanjifa FastPay
Kasino an-tserasera FastPay dia tetik'asa filokana tanora natombok'i Dama N.V. Casinos malaza maro no miasa eo ambany fitantananany. FastPay dia manana fahazoan-dàlana iraisam-pirenena navoakan'ny Vaomiera Gaming Curacao. Ny casino an-tserasera dia zahana matetika ny amin'ny fanaovana ny marina ary mampiasa milina slot manana fahazoan-dàlana irery ihany. Ny tetikasa dia mifantoka amin'ny serivisy kalitao sy ny fandoavam-bola haingana.
Ny toerana malalaky ny casino dia hita ao amin'ny faritra domain COM. Ny firenena sasany dia mitaky tetikasa filokana iraisam-pirenena hahazoana fahazoan-dàlana eo an-toerana, raha tsy izany dia voasakana ny tranokalan'izy ireo. Mba hialana amin'ny famerana toy izany dia misy fitaratra FastPay - tranokala fanampiny ity izay tsy mitovy amin'ny tena ilaina amin'ny fampiasa sy ny interface. Ny hany maha samy hafa azy dia ny sehatra.
tranokala FastPay dia vita amin'ny loko mainty. Ny bokotra sy lalao ihany no manana famoronana mamiratra. Ny tabilao ambony dia asehon'ny tabilao:
"Momba Anay" - misy fampahalalana momba ny casino;
"Fanohanana" - mamela anao hamela fangatahana amin'ny serivisy fanampiana;
"Fandoavam-bola" - ny rafitra fandoavam-bola, ny fametraham-bola ary ny fetran'ny fisintahana dia aseho eto;
"Promo" - ny fizarana dia aseho fampahalalana momba ny fampiroboroboana ankehitriny, ny bonus, ny fepetra takiana amin'ny fahazoana azy ireo;
"Tournament" - ny casino dia mitazona fifaninanana matetika eo amin'ny mpanjifany, ao amin'ny fizarana dia afaka mahita vaovao momba ny fifaninanana ankehitriny sy ho avy ianao.
Eo an-tampony koa dia misy endrika fidirana, bokotra iray hanokafana ny fikandrana fisoratana anarana. Ao amin'ny zorony ambony havanana dia misy bokotra misafidy fiteny iray. Ny interface dia adika amin'ny teny rosiana, anglisy, alemanina, ukrainiana, poloney, finnish, espaniola, tseky, japoney, malay, frantsay, norvezy, tiorka.
Ny sainam-baovao dia mitana ampahany lehibe amin'ny pejy lehibe. Ireto misy tolotra fanentanana navoaka, fampahalalana fototra momba ny asan'ny casino.
Eo ambanin'ilay sora-baventy dia misy rohy mankany amin'ireo faritra lehibe amin'ny casino, misy efitrano malalaky ny lalao misy milina filokana sy lalao hafa. Ny slot rehetra dia azo tsapaina amin'ny fomba maimai-poana - tsy ilaina ny fisoratana anarana.
Eo amin'ny faran'ny tranokala FastPay casino dia misy menio fanovozan-kevitra, rohy mankany amin'ireo faritra misy fampahalalana ara-dalàna. Adidy ny mandinika ny lalàna mifehy ny lalao alohan'ny hisoratra anarana.
Rehefa mitsidika ny tranokala avy amin'ny fitaovana finday ianao, ny interface dia mizatra ho azy amin'ny haben'ny efijery. Io dia ahafahanao milalao ny lalao filokana tianao indrindra amin'ny takelaka, finday avo lenta misy fiononana faran'izay betsaka.
Ny casino an-tserasera FastPay dia manome fanohanana ny mpanjifa 24/7. Azonao atao ny mangataka fanampiana amin'ny fotoana rehetra amin'ny andro. Manampy amin'ny fisoratana anarana, famenoana kaonty sns ... ny fanampiana ara-teknika
Nanolotra fantsom-pifandraisana maromaro ilay casino:
chat an-tserasera - nantsoina tamin'ny alàlan'ny bokotra menio mifanitsy aminy, hita eo amin'ny zoro ambany ankavanan'ny tranokala izy;
- azonao atao ny mamorona tapakila amin'ny alàlan'ny bokotra"Support" eo amin'ny menio ambony;
mailaka - ny fifandraisana fotsiny voalaza ao amin'ny tranokalan'ny casino no tokony andefasanao antso ambony
Alohan'ny hifandraisanao amin'ny serivisy fanampiana dia asaina mankany amin'ny faritra FAQ ianao. Efa misy valiny voaomana amin'ny fanontaniana malaza eto.
Ny mpitsidika ny tranokala dia manamarika ny rivo-piainana mahafinaritra ao amin'ny ny tranonkala ofisialy sy ny toerana mety anaovana ireo sakana lehibe. Ny sora-baventy mamirapiratra dia misolo toerana, mampiseho ireo vahiny sy mpikambana voasoratra anarana ao amin'ny FastPay Casino club avokoa ny fampahalalana ilaina, ary koa ny fanentanana ny fahalianana amin'ny zava-mitranga ao anatin'ny rindriny virtoaly.
Ny pejy lehibe dia misy bokotra fisoratana anarana, bokotra fidirana ary kiheba eo amin'ny menio. Ny interface voasokajy lojika dia manamora ny fivezivezena na dia ny vao manomboka aza. Ireo mpiloka avy amin'ny firenena samihafa dia hahatsapa ho mahazo aina amin'ny pejiny, satria namboarina tamin'ny fiteny maro samy hafa izy:
<► Ny Espaniôla, soedoà, norveziana, finnish, malay, Kazakh, tiorka, frantsay, tseky, japoney ary maro hafa dia tsy dia misy dikany loatra.
Ny style an'ny tranokala ofisialy Fastray dia miavaka amin'ny loko mamirapiratra, noho izany faly izy. Ny tsy fisian'ny fampahalalana tsy ilaina sy ny famolavolana mahafinaritra dia ahafahanao mandositra haingana ny olana isan'andro, milentika any anaty fialamboly filokana maro isan-karazany.
Manolotra fomba maro hametrahana sy hisintona ny fandresena ny casino. FastPay dia miasa amin'ny vola marobe, anisan'izany ny vola crypto - EUR, NOK, CAD, AUD, NZD, PLN, JPY, ZAR, USD, BTC, BCH, ETH, DOGE, LTC. Ny mpanjifa vaovao tsirairay dia tsy maintsy misafidy ny vola fototra amin'ny kaonty amin'ny fotoana fisoratana anarana. Raha tahiry hafa no anaovana ny tahiry aorian'izay dia fanovana mandeha ho azy no hatao.
Ny ankamaroan'ny petra-bola ao amin'ny FastPay dia isaina tsy misy komisiona, ankoatry ny poketra elektronika WebMoney. Amin'ny tranga mihoatra ny 80%, ny vola dia ampidirina avy hatrany amin'ny kaonty - avy hatrany aorian'ny fampindramana dia afaka mametraka filokana ny mpilalao.
Fomba fametrahana ny kaonty lalao:
karatra banky - Visa, Maestro, Mastercard;
e-poketra - EcoPayz, Neteller;
tapakila - EcoVaucher sns
Raha atotaly dia manolotra safidy 18 fametrahana ny casino. Ny fetran'ny famenoana dia miavaka amin'ny tsy fivadihana, mamela anao hilalao izy ireo na dia misy teti-bola kely aza - 10 USD, 10 EUR, 0,05 BCH, 4400 DOGE, 0,025 ETH, 0,001 BTC, 0,02 LTC, 102 NOK, 15 CAD, 15 AUD, 16 NZD, PLN 45, JPY 1285, ZAR 175.
Ny lisitry ny rafitra fandoavam-bola amin'ny fisintomana dia mitovy amin'ny safidin'ireo petra-bola. Ny fandoavana dia atao ao anatin'ny 12-72 ora, miankina amin'ny habetsany sy ny rafitra fandoavam-bola. Ny fetran'ny fisintomana farafahakeliny dia avo 2 heny noho ny habetsaky ny petra-bola.
Raha hisintona vola amin'ny kaonty ianao dia mila manatanteraka ny fepetra bonus rehetra (raha mandray anjara amin'ny fampiroboroboana ny mpilalao) dia mandehana amin'ny fomba fanamarinana.
Ny katalaogin'ny filokana FastPay dia manolotra lalao mihoatra ny 2 arivo isaky ny tsiro. Manana toerana sy roulette avy amin'ny mpamatsy mihoatra ny 30 ny tranokala:
PlaySon, Relax, Igrosoft, Microgaming, sns
Manam-pahaizana manokana amin'ny slot vaovao ny casino - tsy misy milina Retro misy sary efa lany andro. Ny katalaogy dia misy milina fantsom-bato misy kodiarana 3 sy 5, 5 na tsipika fandoavam-bola bebe kokoa. Ny slot tsirairay dia samy manana ny foto-keviny, izay natokana ho an'ny famolavolana, ny lalao, ny feonkira.
Ireo fizarana"Buy Feature" sy"Bitcoin, ETH, LTC" dia tokony hojerena manokana. Ny fizarana voalohany dia misy milina slot izay ahafahanao mividy fihodinana bonus, ny fizarana faharoa dia manolotra slot misy filokana amin'ny endrika cryptocurrency. Ny sasany amin'ireo masinina ao amin'ny FastPay dia misy jackpot.
Manolotra karazana roulette marobe ny casino - amerikana, norvezianina, roulet auto, sns. Ity vondrona lalao ity dia soloin'ny mpanolotra Evolution. Afaka misafidy latabatra mety mifototra amin'ny safidinao manokana sy fetrany ny mpilalao.
Ny programa bonus casino dia soloin'ireto tolotra manaraka ireto:
Bonus ho an'ny mpanjifa vaovao. Izy ireo dia nomena ny tahiry voalohany sy faharoa amin'ny FastPay. Amin'ny tahiry voalohany, ny mpilalao dia mahazo vola bonus sy spin maimaim-poana, amin'ny faharoa - vola bonus ihany. Ny habetsaky ny bonus dia mamaritra ny haben'ny petra-bola. Ny habetsaky ny bonus voalohany dia 865 NOR, 100 USD/EUR, 0,5 BCH, 1,9 LTC, 44000 DOGE, 127 CAD, 130 AUD, 0,01 BTC, 1511 CAR, 0,25 ETH, 10670 JPY, 374 PLN ... Ny haben'ny faharoa dia 2 heny kely kokoa. Indray mandeha ihany no azonao ampiasaina ny tolotra fandraisana.
Rafitra tsy fivadihana. Misy ambaratonga - mba hahatratrarana ny tsirairay dia mila manangona teboka misy anao ianao. Izy ireo dia isaina amin'ny filokana amin'ny milina slot sy lalao hafa. Ny rafitra tsy fivadihana dia misy fiatraikany amin'ny isan'ny bonus azo. Raha te hahatratra ambaratonga vaovao dia mahazo spin maimaim-poana 15 ka hatramin'ny 500 ny mpilalao.
Fastpay dia tetikasa mahaliana iray izay tokony hodinihin'ny mpankafy filokana rehetra. Ny casino dia manolotra izay rehetra ilainao amin'ny fotoana mahaliana, fanitrihana ao amin'ny tontolon'ny filokana. Manantena ny mpilalao fialamboly filokana avo lenta, fandoavam-bola haingana, tranokala mety, bonus marobe ary programa mahatoky mahasoa. Ny fepetra tokana dia ny olon-dehibe ihany no afaka misoratra anarana amin'ilay tranokala.